Kulan looga doodayay sharciga iibka qaranka oo la soo gebagebeeyay-Sawirro – Radio Muqdisho
Kulan looga doodayey Sharciga iibka Qaranka oo hada horyaala Baralamaanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay gudiga Maaliyadda ee Barlamaanka, saraakiil ka socotay Wasaaradda Maaliyadda, iyo Khabiir ka socday Bangiga Aduunka.
Kulanka ayaa lagu falanqeeyey ahmiyadda uu sharcigaan u leeyahay dalka iyo sidii xildhibaanda baarlamaanku u dadajin lahaayeen ansixintiisa, sharcigaan ayaa jir-jirey xiligii dowladii Kacaanka, waxaana sharcigaan la doonayaa in la waafajiyo shuruucda caalamka si u noqodo mid la jaanqaada dunida inteeda kale.
Sharcigaan meel marintiisa wuxuu aas aas u noqonayaa in loo gudbiyo Wasaaradaha, hey’daha qaranka iyo gobolada dalka si waxa ay soo gadanayaan iyo wax ay iibinayaan loo waafajiyo sharcigaan.
Wasaarad kasta waxay yeelanaysaa waax qaabilsan iibka qaranka, waxaana waaxdii ugu horaysay laga hirgaliyey Wasaarada Maaliyada.
Gudoomiyaha gudiga Maaliyadda Baarlamaanka Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir ayaa saxaafada uga warbixiyey waxyaalihii looga hadlay kulanka, iyo sida ugu haboon oo xildhibaanada baarlamaanku u dadajin lahaayeen meel marinta hindise sharciyeedka iibka qaranka.
“Kulankaan oo labo maalimood noo socday, waxaan uga doodnay horumarinta iyo dib u eegista hindise sharciyeedka iibka qaranka, qandaraasayada iyo adeega loo qabto dadka, waxaaana u mahad celinayaa dhamaan dadkii ka qaybgalay. Doodii meesha ka socotay waxay ahayd mid miro dhal ah, waxayna u noqonaysaa tusaalooyin la soo qaadan karo marka barlamaanku ka doodayo sharciga iibka qaranka, oo hada horyaala barlamanaka horayna u soo maray akhriskii koowaad. Hindise sharciyeedkaan wuxuu ku salaysan yahay horumarka dalka iyo in aan helno suuq xor ah, wuxuuna wax weyn ka tarayaa la dagaalanka musuq maasuqa” ayuu yiri Xild. Samaan.
Xildhibaanka ayaa dhanka kale sheegay iney muhiim tahay waxkasta oo la kala gadanayo ama la soo iibinayo iney noqdaan kuwo daah furan kana madax banaan wax isdaba marin, taas oo yareyn karta musuq maasuqa iyo xatooyada xoolaha dad weynaha, wuxuuna muhiimad weyn u leeyahay qaranimada Soomaaliya.
Wasiirka arimaha gudaha oo lagu soo dhaweeyay Cadaado-Sawirro